Iingxelo zemidlalo yamanqindi kule mpela veki igqithileyo
Ibiluvuyo nemincili, kuminciwe ngexesha iIndoor Sport Centre kufutshane neMathola Sun ibizise kwakhona amanqindi akudidi olu phezulu.
Kumlo ubujongwe ngamehlo abomvu ibingumlo ubutaka iintlantsi phakathi kwentshatsheli yoMzantsi Afrika kwi Welterweight, uXolani Mcotheli oyinzalelwane yaseMthatha ongene eqongeni nemilo engamashumi amabini anesibini waphumelela yalishumi elinesixhenxe waphuncukana neminye imilo elishumi linesixhenxe, kunye nomceli mngeni uMarcus Lebogo waseRhawutini onemilo elishumi linesihlanu waphumelela elishumi linanye waphuncukana nemilo emithathu walwa ngokulinganayo komnye.
UMcotheli ubonakalise isakhono sakhe ngokupheleleyo emva kokuba ephuncukelelwe yingqosha kanye kwisandla sakhe esinamandla sasekunene ukususela kumjikelo wesithathu. Engunongalwana enjalo uTiger (Mcotheli) ukwazile ukuwulawula umlo kwimijikelo esithoba yokugqibela esezintlungwini zegxalaba lakhe. Ongumqeqeshi wakhe uNcedo Cecane uthe malindele nabani na ongumceli mngeni abanamkhethe.
Komnye umlo ubulindelwe ngomdla omkhulu ibingumlo phakathi koLwandile Ngxeke oyinzalelwane yaseSada kunye noZolile Miya ophuma kwelase Rhawutini kudidi lweFlyweight kwimijikelo emithandathu. ULwandile uthe unotshe kuye uzakusiphakamisa isidima somzala wakhe uXolisa "Gusheshe" Magusha osandula kuphuncukana nesicoco sakhe kwiveki ephelileyo sixuthwa nguSibusiso Bandla wase Mdantsane.
Loka Ngxeke ukhe wabaxhalabisa abalandeli bakhe emva kwenqindi elimbethe kabuhlungu kwimbambo zasekunxele. Kusenjalo yaphinda yamhlinza entla kwemehlo lasekunene nto leyo imgqibezelise kakubi lomijikelo mithandathu kodwa waphumelela cacileyo ngamanqaku.